Meteza ho Samaritana Spam!
Alatsinainy Martsa 15, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Bill Dawson
Ny Samaritanina Spam dia tsy mampiasa ny kaontiny mailaka fotsiny mba hifandraisana, fa manampy amin'ny famongorana spam ho an'ny hafa. Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nitantara ny fomba nandaozany azy Yahoo! kaonty mailaka ary nifindra tany amin'ny Gmail, satria izy io dia, "feno SPAM avokoa ary tsy azo vakiana." Ny tsy fantany dia ity fihetsika ity dia manimba ny Mpanome Tolotra Aterineto (ISP), ny mpivarotra ary ny spam.
Mpanome tolotra Internet (ISP) mila tamberina hanatsarana ny traikefan'ny mailakao. Raha tsy misy ny mpampiasa mandroritra fitarainana sy manamarika ny mailaka ho spam, mpanome tolotra aterineto tsy manana fampidirana hiarovana ireo mpampiasa amin'ny fanararaotana.
maro mpanome tolotra aterineto dia manomboka ny fanao amin'ny fandefasana hafatra any amin'ny folder spam / bulk ary fanaraha-maso raha ahitsin'ireo mpampiasa izany. Raha tsy misy ny fidiran'ny mpampiasa dia manomboka manana olana amin'ny lazany ny mpivarotra mailaka, izay manimba ny fandefasana azy.
Betsaka ny adiresy mailaka nilaozana mpanome tolotra aterineto hamerina ilay kaonty ary hampiasa azy io ho toy ny fandrika spam hamongorana ireo mpandefa manafintohina. Mandrahona ny mpivarotra ara-dalàna izay manohy mandefa mailaka izany, satria tsy fantatr'izy ireo fa nilaozana ilay kaonty.
mpivarotra hampiasa fitsapana A / B, hisokatra, tsindrio ary hampiova fo hanadio ny hafatr'izy ireo sy hanatsarana ny fampidiran'ny mpampiasa. Na dia misafidy ny hisoratra anarana amin'ny hafatr'izy ireo aza ianao mpivarotra maniry, ary mila ianao hifandray.
Spammers te-handefa hafatra fotsiny! Tsy miraharaha izy ireo raha mahatratra ny boaty fampidirana anao na ny fampirimana spam / bulk. Amin'ny tsy firaharahiany ny fanafihan'ny hafatra tsy ilaina dia mahazo izay tadiaviny izy ireo. Ny mpampiasa dia afaka manitsy ny olana amin'ny fanamarihana ireo hafatra ireo ho amin'ny spam, ary fampandrenesana ireo ISP momba ny olana.
Ny morale amin'ity tantara ity dia mandany minitra vitsy hijerena ny spam tsara sy ratsy dia manampy amin'ny fanatsarana ny mailaka ho anao sy ho an'ireo mpampiasa hafa. Aza atao ambanin-javatra ireo mailaka avy amin'ny spammers na mpivarotra ireo. Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana, fanamarihana ny mailaka ho toy ny spam, na ny fanesorana ny mailaka avy amin'ny fampirimana be / spam, manatsara ny traikefa mailaka ho an'ny rehetra ianao.
Ampio ny rafozam-baviko, ary ataovy toerana tsara kokoa ny tontolon'ny mailaka… Manaova spam samaritan!
Tags: Fanamarinana ny marikacantalouponjastatistika mailaka findayfampandrosoana ny vokatrarepinssomediafanadihadiana swipp
Ny marketing amin'ny mailaka dia nanjary iray amin'ireo endrika be mpampiasa indrindra amin'ny varotra an-tserasera, ary vokatr'izany dia iray amin'ireo mahomby indrindra amin'ny orinasa. Fahita ankehitriny ny spam ary hitohy izao.
Ny tokony ho fantatry ny tompona orinasa dia ny fandrindrana spam amin'ny fotoana fohy, satria tsy misy ilana azy ary tsy manome valiny firy noho ny lisitra opt-in.